Izinombolo zefoni ze-Hyperlink ezinama-Anchor Tags
Izinombolo zefoni ze-Hyperlink zokuPhequlula Kwamaselula
NgoLwesibili, Agasti 24, 2010 NgoLwesibili, ngo-Mashi 31, i-2015 Douglas Karr
Abangane bami bazokhipha lokhu, ngoba ngivame ukuphendula ifoni yami… kepha hheyi ... lokhu kumayelana nokusiza yakho inkampani, hhayi eyami! Ngokwanda okukhulu kwama-iPhones, ama-Droids namanye ama-smartphones, sekuyisikhathi sokuthi uqale ukwengeza indawo yakho ukuze isetshenziswe kusiphequluli seselula. Sisanda kwakhela umuzwa ohluke ngokuphelele womsebenzisi weklayenti, sikhipha uhlobo lweselula lohlelo lokusebenza lewebhu esilakhele lona futhi silisebenzisa ukuze lisetshenziswe ku-iPhone naku-Droid.
Ngenkathi inkampani yakho ingakwazi ukukhokhela ukwakhiwa kabusha kwesiza sakho ukuze kusetshenziswe iselula, kunento eyodwa elula ongayisebenzisa ngokushesha: Xhumanisa izinombolo zakho zocingo ukuze abasebenzisi beselula bamane bazichofoze bese beqala ucingo. I-syntax ilula impela:
Okujwayelekile ithegi yehange ngesixhumanisi sewebhu sisebenzisa i-URL ngenani, isixhumanisi se-imeyili sisebenzisa mailto… Isi syntax senombolo yocingo simane ezifana. Ngivivinye inani ngama-parentheses nangaphandle kwama-parentheses, izinkathi kanye nodeshi nakho konke kubonakala kusebenza ku-iPhone naku-Droid. Kodwa-ke, bengizokhawulela inombolo yocingo ibe izinombolo zangempela kunani le-href.
Cabanga nje ukuthi zingaki izingozi zemoto ongasindisa abantu kuzo ngakho-ke abadingi ukuzama ukubamba ngekhanda noma ukubhala inombolo phansi!
Tags: ucingo lwe-hrefhtml yenombolo yocingohtml isixhumanisi sefonihtml inombolo yesixhumanisi sefoniumaki wefoni we-htmlIsixhumanisi sefoni se-htmlinombolo yocingo yokuxhumanisaIzinombolo zocingo ze-hyperlinkisixhumanisi senombolo yocingo ye-iphoneXhuma inombolo yocingoisixhumanisi sokuphequlula iselulaisixhumanisi seselulaithegi yenomboloisixhumanisi sefoni htmlisixhumanisi senombolo yocingoisixhumanisi senombolo yocingo htmlukumaka ifoniomaki befoniithegi inombolo yeselulaumaka iselulamaka inombolo yeselulaithegi omakhalekhukhwiniithegi inombolo yocingoumake inombolo yocingoisixhumanisi sefoni html
IPharadesi NgeDeshibhodi: Okuqukethwe Nezikhungo Zokulawula Izikhangiso
Ukwehluleka: Imfihlo Yokuphumelela
Aug 25, 2010 ku-6: 48 AM
UGenius Doug! Hlela ukuqala ukukusebenzisa kuwo wonke amasayithi amaklayenti wami. Kulungile uma ngithumela lokhu kubhulogi yami? Vele ukukunikeza ubuqambi obugcwele. Kuhle kakhulu! 😎
Sep 6, 2010 ngo-11: 37 PM
Ngakho-ke, ingabe sikhona isizathu sokuthi UNGABEKI ukubeka ama-parentheses, izinkathi, noma amadeshi enombolweni yocingo? Futhi ingabe inombolo yefoni ye-html isebenza njengethegi yesihloko? Ngabe kukhona inzuzo ye-SEO yokwenza ithegi yesihloko ngaphakathi kwekhodi ye-href?
Isiza Sami (chofoza ukuze uhlele)
Sep 7, 2010 ku-7: 08 AM
@edeckers Izinga le-RFC3966 alibonakali lisekela ama-parenthesis kepha lisekela ithani lezinye izinketho nezimpawu zokubizwa kwamazwe omhlaba, izandiso, njll.
Ngokuqondene ne-SEO, angiboni ukuthi kungani kungenjalo! Mhlawumbe igama lebhizinisi + “inombolo yocingo” kungaba yindlela enhle yokuqalisa!
Ngo-Apr 5, i-2011 ku-6: i-33 PM
Sawubona, lelo iqhinga elipholile kodwa ngazama lokhu futhi iFirefox yanginika umyalezo wephutha omubi ithi yayingazi ukuthi ingasifunda kanjani isixhumanisi. Kimi, awufanele umyalezo omubi wephutha lapho othile echofoza isixhumanisi kwideskithophu ukuze umakhalekhukhwini akwazi ukufinyelela kusixhumanisi. "Cindezela isikhathi eside" kunombolo yocingo ku-Android futhi izama ngokuzenzakalela ukushayela inombolo noma kunjalo. Ngabe nginephutha? Ingabe kukhona umsebenzi ezungeze?
Nov 26, 2011 ngo-9: 02 PM
Kubhekiswe nakanjani kumsebenzisi weselula, Endlini.
Aug 28, 2013 ngo-2: 46 PM
Ungahlala ukugwema lokho ngokuthola isiphequluli. Yibeke ku-div efihliwe kwiziphequluli ezingesona iselula / ezinkudlwana.
Ngo-Apr 11, i-2011 ku-10: i-48 PM
Siyabonga ngalokhu okuthunyelwe okuthunyelwe nguDoug :)
UJun 14, 2011 ngo-11: 20 AM
Ngibonga kakhulu. ilula njengoba ushilo, kepha isebenza kahle. Ungaya ezinyathelweni ezimbalwa bese uyenza ixhumane nesithonjana bese udala isihloko kuthegi yehange ukukhombisa inombolo yakho yocingo kanye nemiyalelo eyengeziwe yabasebenzisi abaphakamisela igundane labo phezu kwesithonjana. Ngiyabona futhi!
Sep 28, 2011 ku-10: 35 AM
singakwazi yini ukufaka umbhalo kunombolo yocingo lwe-hyperlink?
Sep 28, 2011 ngo-4: 11 PM
Ngikholwa ukuthi ukuguquguquka kwe-href kuvumela izinombolo kuphela…, kepha ungabeka noma imuphi umbhalo ongawuthanda ngaphakathi kwethegi yehange uqobo.
May 16, 2012 ku-4: 48 PM
Lokhu iqhinga elikhulu! Ngizoqala ukungeza lokhu kumasayithi kusuka manje. Ngiyabonga!
Jan 22, 2013 ngo-12: 05 PM
Angiqiniseki nge-100% (futhi ngiyazi ukuthi le yingxoxo endala kakhulu ngakho-ke lokhu kungenzeka kungaphinde kubuye) kepha ingabe ama-Smartphones amaningi kulezi zinsuku akakwenzi lokhu manje?
Jan 22, 2013 ngo-1: 37 PM
@ facebook-502306174: disqus many do, kepha amaningi futhi afometha inombolo ngokungalungile ngaphandle kokuthi uyichaze.
Nov 19, 2013 ngo-9: 21 AM
Mar 31, 2015 ku-12: 22 PM
Ukulungiswa okulula nje… uthe uncoma ukuthi sigcine konke kodwa izinombolo zangempela kunani le-href ”
Nginesiqiniseko sokuthi usho ukuthi "gcina yonke into ngaphandle kwezinombolo zangempela OUR OF the href value"
Noma-ke ungavele ushayele inqwaba yezimpawu zokubhala 🙂
Mar 31, 2015 ku-5: 43 PM
Jul 24, 2015 ku-7: 37 AM
Ngiyabonga uDouglas, Iyiphi i-Social Media Bar oyisebenzisayo? Ibhulogi yakho ibukeka inhle futhi unokuqukethwe okuningi okuhle. Singathanda ukuxhuma ku-Google Plus. ngiyabona futhi
Jul 24, 2015 ngo-11: 04 PM
Ngiyabonga Dean! Ngemuva kokucwaninga okuningi ngenetha ukuthola isixazululo esikhulu, ngangena ku Abakwa-Shareaholic. Inezici eziyikhulu ngaphezulu esingazisebenzisi - kepha iguquguquka kakhulu!
Aug 14, 2015 ngo-3: 49 PM
Angazi namanje kule kholamu, ukuthi ungathumela kanjani i-imeyili inombolo yocingo - kumakhalekhukhwini, ukuze umphathi wami akwazi ukuyithinta nje bese ushaya ucingo.
Aug 15, 2015 ngo-4: 21 PM
Sawubona Dee, isoftware yakho ye-imeyili izodinga ukuxhasa i-HTML kanye nekhono lokwengeza isixhumanisi esisichaza ngenhla. Le ndatshana ibikhuluma kakhulu ngokuthi ungakwenza kanjani lokhu kuwebhusayithi yeselula, hhayi i-imeyili.
I-Oct 5, i-2015 ku-4: i-11 PM
Sawubona Douglas, kusebenza kanjani kahle lokhu kubashayeli bamazwe aphesheya? Ngabe ubona kungcono ukuthi usebenzise inombolo yomhlaba wonke (isb. +44), noma ikhodi yendawo?
I-Oct 6, i-2015 ku-11: i-24 PM
Ukukhuluma iqiniso, Ben, ngikholwa ukuthi isebenza ngokungenaphutha. Ngikholwa ukuthi abafonayo abaningi bamanye amazwe basebenzisa amakhodi endawo. Abaculi bomkhonyovu baseNigeria bafika ngokushesha emqondweni. 🙂
I-Oct 20, i-2015 ku-7: i-32 PM
Sawubona, Ngabe i-hashtag ingasetshenziswa njengesixhumanisi ukuqala ucingo? Ngiyizwile ikhulunywa ngolunye usuku kodwa angikayiboni. Ngiyabonga!
I-Oct 20, i-2015 ku-10: i-51 PM
Angikakuboni lokhu okwamanje. Ngicabanga ukuthi ungabhala uhlobo oluthile lwe-plugin noma iskripthi, kepha akuwona umsebenzi wendabuko we-HTML.
Okthoba 23, 2015 ngo-12: 46 AM
Ngiyidala kanjani inkinobho ethi “shayela manje” ohlelweni lokumaketha i-imeyili olufana ne-Microsoft Publisher? Futhi ngingayifaka kanjani kwi-mailchimp?
Nov 4, 2015 ngo-12: 07 PM
Ngakho-ke angidingi ukufaka - noma. phakathi kwezinombolo? Futhi, ungasifaka kanjani isandiso ukuze isixhumanisi sibize isandiso ngqo?
Nov 4, 2015 ngo-4: 17 PM
Ngaphakathi kwenani le-href, awufuni amadeshi noma amachashazi phakathi kwezinombolo. Ngaphakathi kombhalo wehange, ungabhala noma yini.
Mar 18, 2016 ku-6: 06 PM
I-athikili enhle - iyasiza kakhulu. Ngiyabonga!
May 25, 2016 ku-7: 02 AM
Aug 2, 2016 ngo-10: 59 PM
Sawubona Douglas, Ngiyabonga kakhulu ngokwabelana ngale khodi.
Sep 19, 2016 ku-11: 05 AM
Isu elihle uDoug! Ngiyabonga. Le ndatshana ibaluleke kakhulu, ngemuva kweminyaka eyi-6 ngakho konke okuhamba kuselula.
Aug 22, 2017 ku-2: 41 AM
Kuyasebenza!! Ngiyabonga Doug !! 😉
Nov 17, 2017 ngo-10: 20 PM
Ngiyabonga ngosizo lwakho!
Jan 2, 2019 ngo-4: 06 PM
Isifundo esifundisa kakhulu! Empeleni, ngithanda isici se- "chofoza ukubiza iwijethi" esikhundleni "senombolo yocingo echofozekayo" kangcono. Ngemuva kokuzama i-plugin ye-Callback Tracker esizeni sami, ngibona imiphumela eminingi kakhulu enekhono lokushayela umkhondo wami, esikhundleni sokuthi bangishayele ucingo. Ngokwami, ngikubona kudingekile kumasayithi amaningi. Nasi isixhumanisi sokuxhuma https://callbacktracker.com/plugins/wordpress-click-to-call-plugin-install-tutorial/
Aug 6, 2019 ngo-1: 08 PM
Kuhle kakhulu, ngiyabonga ngokwabelana!